Holmbygden.se | Ukuthuthukiswa Holm wesifunda, #ShepherdsHut – #Holm izindawo | ikhasi 2
okuthunyelwe okusha →
Posted on 25 Septhemba, 2019 ngu Holmbygden.se
Läs mer i referat på HolmsSK.se/alaget futhi lokalfotbollen.nu.
Ama-movie kusukela ukwakhiwa amandla omoya
Posted on 14 Agasti, 2019 ngu Holmbygden.se
Umoya yakha Uusimaa Bergen Crow Croft iqala izokuphela.
Nazi amafilimu ezimbili ezenziwe unjiniyela Eolus wezokuThutha isakhiwo umsebenzi, kakhulu Holmbor walandela ekude futhi emigwaqweni onyakeni odlule.
Ukwakhiwa izigxobo zikagesi futhi ukufakwa amaphiko
Ezokuthutha izindwani Crow croft futhi Uusimaa eBergen
Posted in Izindaba	| 1 Phendula
Jessika Falk kusukela Holm inaugurates Square Festival Sundsvall
Posted on 26 Julayi, 2019 ngu Holmbygden.se
Jessika udlala namuhla emcimbini wokuvula lomkhosi Square.
namuhla 15 asivulela Square Festival Sundsvall futhi akekho omunye ngaphandle Jessica Falk kusukela Holm nge futhi udlale ku yokwahlukaniselwa esiteji main.
Abambalwa baye bangathembeka mhlawumbe aphuthelwe ukuthi Anders “Tjacka” Söderberg nge izimpande Sörbygden kulo nyaka wabamba entsha futhi elulama elidala party emgwaqweni endaweni sama entsha – Torg party. Abaculi kusukela ubukhulu ngo-90s ezifana ne-Type, Melodie MC nge kudlala eziningana ngemikhosi. Nokho, okokuqala, uJessica Falk kusukela Holm. isikhathi 15:00 ukudonsa off, futhi kungenwa mahhala ngesikhathi emcimbini wokuvula.
Funda kabanzi lapha Jessica Falk futhi Torgsfesten.
International ngokumelene South Africa uyokhalela ezingeni Holm Vallen
Posted on 14 Juni, 2019 ngu Holmbygden.se
Holms SK wadlala ngokumelene ngamazwe isivakashi-ukusebenza baseNingizimu Afrika labavela Azari Wind ngesikhathi Holm yashayisa unqenqema.
NgoLwesithathu kusihlwa ngo-ihlelwe emdlalweni ngamazwe phakathi Sweden, Hlunga ehlanganisa SK, futhi eNingizimu Afrika, emelelwa abasebenzi isivakashi isakhiwo ophephela abaphehla ugesi “Crow croft” (laphansi).
Ukwedlula 20s bahambele izisebenzi umoya energy zikleliswe ngokuba kwekucala kwemidlalo futhi nje njengoba abaningi nabo bahlala phezu Holm-igalari.
Abantu bakuleli laseNingizimu Afrika, ongalokothi wadlala football game ndawonye, ​​ezemidlalo kazwelonke lakhe langempela ibhola lombhoxo, ukudlalwa okuhle nokubi ukumelana empeleni esiqinile anolaka ezinzima. Ngaphezu kwalokho, futhi wadlala mhlawumbe zabo ezikahle kakhulu, futhi scorer, Mendu, Holm endaweni nokulinganisa inani kudlala.
Hsk wayesalokhu amahlanga libukhali ithole amabhola ngaphezulu inetha. Imeshi iphelile 7-2 ukuze Holm. Nokho, okubaluleke kakhulu,, fun lokuhlangana evunyiwe ukulwa nemizamo kokubili amaqembu akunika ukuqeqeshwa okuhle imilenze. Sethemba wena manje futhi ngaphezulu abasebenzi isivakashi izibukeli ukuza ehlobo ekhaya okufanayo.
Izinhloso: Niklas 3, Tommi Torvet (zigqila ngoba Söråkers FF) 2, Yonas 1, Mendu 1.
ku 16/6 kl 14 ukudlala olandelayo ekhaya umdlalo Holm Vallen phakathi Holm SK futhi Ik Fränsta. Ukukhonza ikhofi, izinja hot futhi amabhega.
umdlalo Ikhalenda, yi mm.
Ulwazi mayelana Holms SK futhi Mahhala Insizakalo ye-SMS nge izindaba kanye nemiphumela mayelana Holms SK.
Umbhalo waphansi: Indawo Crow cottage has ngaphandle umlando ekuseni kusukela 1600s ukwethula utländare. Umlando efundekayo ezizungezile cottage futhi inhlekelele edabukisayo ezenzeka lapho ungafunda kabanzi mayelana här i Lidens Tidning.